मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर - Mechikali News
मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको छ । सो आयोजनाको कूल ४५६ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि मुलुकको कूल जडित क्षमता झण्डै दुई हजार मेगावाट पुगेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देश बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ, यसले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ,’उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार २१ गते आयोजनाको उद्घाटन गरेपनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
उद्घाटन भएको दुई महिनापछि मात्रै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरेको उनले जानकारी दिए । बिजुली पूर्ण रुपमा खपत हुन नसक्दा रातको समयमा झण्डै ४०० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै दिउँसो समेत २०० देखि ३०० मेगावाटसम्म बिजुली जगेडामा रहेको छ । जगेडामा रहेको बिजुली भारत निर्यातका लागि पहल भइरहेको भए पनि हालसम्म तार्किक निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । बिजुली खेर जाँदा प्राधिरकणलाई हाल दैनिक रु.चार करोड बराबरको घाटा हुने गरेको छ । खेर गएको बिजुलीको खपत बढाउनका लागि भइरहेको पहलसमेत सार्थक हुनसकेको छैन ।
प्राधिकरणका आफ्नै २२ आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । मर्मतका नाममा लामो समयदेखि बन्द रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए को ६० मेगावाट प्रणालीभन्दा बाहिर छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध बिजुलीमध्ये एक हजार ५४२ मेगावाट बराबरको बिजुली मात्रै खपत भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कूल एक हजार ३५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरेकामा माथिल्लो तामाकोशी जोडिएपछि क्षमता बढेर एक हजार ९०० मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी अनेकन हण्डर, ठक्कर व्योहोरेर तोकिएको समयभन्दा झण्डै पाँच वर्ष ढिला सम्पन्न भएको छ । नेपाली लगानीमा निर्माण गरिएको आयोजनाको सुुरुआती लागत ब्याजबाहेक रु. ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
प्राकृतिक विपद्, सीमा नाकामा भारतको अवरोध, गोरखा भूकम्प, कोरोना कहर, सुरुङमा भएको डिजाइन परिवर्तन तथा कोरोना कहरका कारण लागत बढेर रु. ८४ अर्ब पुगेको छ । त्यसमा ब्याज मात्रै रु.३२ अर्ब रहेको छ । सुुरुआती चरणमा रु.१४ अर्ब बराबरको ब्याज रहने भनिए पनि त्यो बढेर रु.३२ अर्ब पुगेको हो । ब्याजबाहेकको लागत रु.५२ अर्ब पुगेको छ ।
अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले हिन्दू तथा बौद्ध परम्पराअनुसार प्रकृतिको पूजा गरेर आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ४७ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन हुँदै रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१३ स्थित साँखेमा नवनिर्मित २२०÷१३२ केभी क्षमताको न्यून खिम्ती सबस्टेशनमा जोडिएको छ । सो सवस्टेशन हुँदै बिजुली ढलकेवरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशनमा पु¥याइएको छ ।
विसं २०६८ भदौ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिलान्याश गरेका थिए । आयोजनाको निर्माण सकिन भने ११ वर्ष लाग्यो ।
मुख्य सुरुङको संरचना निर्माणको डिजाइनमा भएको परिवर्तन, २०७२ सालको गोरखा भूकम्प, सीमा नाकामा भारतले गरेको अवरोध, लामोसाँघु चरीकोट सडक स्तरोन्नतिका कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा भएको अवरोध, हाइड्रोमेकानिकल कार्यका ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन तथा कोरोनाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुन पुग्यो ।
आयोजनाले वार्षिक रूपमा दुई हजार २८१ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन गर्छ । त्यो भनेको कूल दुई अर्ब २८ करोड यूनिट बिजुली हो । आयोजना अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको भएकाले पनि बढी बिजुली माग हुने साँझको समयमा औसतमा चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ । सन् १९९९ मा अष्ट्रियन नागरिक डा.क्रिश्चियन कल्हरले रोलवालिङ जलविद्युत् आयोजनाका नामबाट पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी १२० मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भिक जानकारी दिएका थिए । अत्यन्तै सस्तो र आकर्षक देखिएपछि प्रधिकरणले २०५७ देखि २०६० सालसम्म आफ्नै आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोतको प्रयोग गरेर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत शेयर छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रतियूनिट औसतमा तीन रुपैयाँ ५० पैसा छ । व्यापारिक उत्पादन भएको वर्ष औसतमा चार रुपैयाँ ०६ पैसा प्रतियूनिटमा खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको छ । प्राधिकरण र अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको खरिद दर हालसम्मकै सस्तो हो । सोही कारणले प्राधिकरणलाई थप फाइदा हुने देखिन्छ । रासस